အင်တာနက်ကို share လုပ်ပြီးသုံးရအောင် - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
အင်တာနက်ကို share လုပ်ပြီးသုံးရအောင်
ပို့စ်7ခုအတွက် 41 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ဒါလေးက လွယ်လွယ်လေးပါ ..ဒါပေမယ်. ဒါလေးကို မသိလို. ကျွန်တော် တို. ၃ လ လောက် အင်တာနက် သုံးရတာ တော်တော် ဒုက္ခရောက်ခဲ.ရတယ်.. အခန်းထဲ မှာ ၂ ယောက်နေပြီး အင်တာနက် လိုင်းက တခုတည်းရှိတော. တယောက်ကျ တယောက်တက်စနစ် နဲ. သုံးခဲ.ကြရတာလေ... ဘယ်လို share ရမှန်း မသိခဲ.ကြဘူးလေ ...တော်တော် များများ ကတော.ဒီအကြောင်းကို သိပြီးသားပါ ...မသိသေးတဲ. သူတွေ အတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ် ဗျာ...
control panel ---- network and sharing center -----manage wireless network---add-----creat an ad hoc network----next----network share နေရာမှာ နာမည် တခု ပေးလိုက်ပါ .... security type မှာ No authentication ကို ရွေးလိုက်ပါ ။ password မတောင်းစေချင် ရင် အဲဒါ ကို ရွေးပါ။ တောင်းစေချင်ရင်တော.
WPA2-personal ကိုရွေးပါ။ အဲဒါ ဆိုရင်တော. security key ထဲ.ပေးရပါမယ် ။next....turn on internet
connection ကို ရွေးပါ .... share လက်ခံမယ်. computer ရဲ. network notification မှာ ကလစ်လုပ်ပြီး
မိမိ share ပေးထား တဲ. network name ကို connect လုပ်ပြီး share လုပ်သုံးနိုင်ပါပြီ...password ပေးထားရင်လည်း ထည်.ပေးလိုက်ပါ ..
ရှင်းတာ နည်းနည်း ရူပ်သွား လား မသိဘူး နော် ...လွယ်လွယ်လေးပါ..လက်တွေ. စမ်းကြည်.လိုက်ပါ..
အဆင်ပြေ မှာ ပါ.. မရှင်းရင် ပြန်မေးပေးကြပါ....
အောက်ပါအသင်းဝင် 26 ဦးတို့မှ htikewailinn အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
$ညိုမင်းလွင်$, ကိုကြီးထွန်း, ချယ်ရီမင်း, စိုင်းကျော်သီဟအောင်, ရှင်းလေး, ဝင်းအောင်, သျှူးထက်ထက်ထွန်း, အိုင်တီကောင်လေး, မောင်ပေါ်ဦး, အေးချမ်းမင်း, မြန်အောင်သား, AZM, bonge, g00gle, gongyishin, Hla Myo Thein, htethtet, ImGenius, kokomaung.ko28, kyawswarl, minthumon, pannuko, thandaroo, themoon49, thureinsoe, tu tu
Find More Posts by htikewailinn
ပြန်စာ - အင်တာနက်ကို share လုပ်ပြီးသုံးရအောင
အဲကောင်ကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့သူ့ကိုနောက်တစ်လုံးကလာမချိတ်ရင် အင်တာနက်အဆက်ရတယ် နောက်တစ်လုံးကလာချိ်တ်လိုက်ရင်အဲဒီ၂လုံးကချိတ်လို့ရပေမယ့် နိုးအင်တာနက်အဆက်ဖြစ်ဖြစ်သွားတယ် ၂လုံးလုံးမရတော့ဘူး ကျန်တော်အင်တာနက်ကော်နက်ရှင်ရှယ်ယာဆိုတာပေးထားပါတယ် အဲဒီလာဆက်တဲ့တစ်လုံးကို နော့ကွန်နက်ပေးလိုက်ရင်တော့အဲဒီလန်ထိုးထားတဲ့စက်က အင်တာနက်ပြန်ရတယ် ဟိုကောင်ကိုဝါယာလက်ပြန်ချိတ်လိုက်ရင် အင်တာနက်အဆက်ကမရတော့ဘူး အဲဒီတော့နောက်တစ်လုံးကိုအဲလိုချိတ်ပြန်တော့လဲ အဲကောင်က ဖွင့်လို့ရပေမယ့် ကော်နက်ရှင်ရှယ်လို့မရဘူး တစ်လုံးက အိပ်ပီ တစ်လုံးက တိုရှီဘာ ဘာလို့အဲလိုဖြစ်တာလဲဟတ်ဝဲမနိုင်တာလား ၀င်းဒိုးမှာပြသနာရှိလို့လား အဲဒါနဲ့ကျန်တော်ConnectifyInstaller ဒီကောင်သုံးပြီးတော့အင်တာနက်ကော်နက်ရှင်ရှယ်ပေးတော့လဲအင်တာနက်ကိုရှယ်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်ဒီကောင်မှာ လိုကယ်ဧရိယာကော်နက်ရှင် နဲ့ရှယ်ပေးတာ နော် အဲဒါဘာပြသနာဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးရှင်းပြပေးပါနော်
အောက်ပါအသင်းဝင်5ဦးတို့မှ wunna313 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုဂျိန်း, စိုင်းကျော်သီဟအောင်, အိုင်တီကောင်လေး, g00gle, minthumon
ပို့စ် 15 ခုအတွက် 33 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကျွန်တော်ရှယ်ယာပေးကြည့်တယ်။ တခြားစက်က ခဏပဲတက်တာ။ ပါက်စ်ဝါဒ်ပေးလိုက်ရော လိုင်းကပျောက်သွားရောဗျာ။ ဘယ်လိုဖြစ်သွားတယ်လို့တော့ မသိဘူး။ ကူညီကြအုံးဗျို့။
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ ကိုကြီးထွန်း အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by ကိုကြီးထွန်း
အင်တာနက်ကို ဝေမျှသုံးတဲ့နေရာမှာ connectify ဆိုတဲ့ဆော့ဖ်ဝဲ သုံးပြီး ဝေမျှနေကြလို့ အခက်အခဲကြုံနေရပါတယ်။
ကျွန်တော်က user name နဲ့ Password တစ်ခုကို သင့်တင့်တဲ့ ငွေပမာဏတစ်ခုနဲ့ ၀ယ်လိုက်ပြီ ဆိုပါတော့။ ၀န်ဆောင်မှုပေးတဲ့ အင်တာနက်ဌာနကို ၀င်လိုက်ပြီးတဲ့နောက် (ကိုယ့်ကွန်ပြူတာမှာ အင်တာနက်ချိတ်ဆက်ပြီးတဲ့နောက်) Connectify ဆော့ဖ်ဝဲကို အသုံးပြုပြီး ဝေမျှသုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။ ဆော့ဖ်ဝဲကို ငွေပေးပြီး ၀ယ်နိုင်သလို Crack တွေကိုလဲ အလွယ်တကူ ရနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အဲဒါက ကျွန်တော့်အတွက် ပြဿနာဗျ၊ ဝေမျှသုံးနေကြတော့ နဂိုကတည်းက လေးနေတဲ့ ကွန်နက်ရှင်က အိကျသွားတော့တာ။ ဆော့ဖ်ဝဲကို ပိတ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းများရှိရင် ကူညီကြပါဦး။
တကယ်တမ်း ဝေမျှသုံးလို့ရတယ်ဆိုပေမယ့် သူတစ်ပါးကို ထိခိုက်မှုရှိတယ်ဆိုရင်တော့ စဉ်းစားသင့်တယ်လို့ ထင်တယ်ပေါ့ခင်ဗျာ။ နိုင်ငံခြားမှာလို အလကားမတ်တင်းနဲ့ ရတဲ့နေရာမျိုးမှာ ဝေမျှတယ်ဆိုရင်တော့ တစ်မျိုးပေါ့။ ပြည်တွင်းမှာတော့ အခြားသုံးစွဲသူတွေကို အနည်းနဲ့အများ သက်ရောက်မှုဖြစ်စေပါတယ်။ ငွေကြေးကိစ္စကတော့ အဓိကမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။
Find More Posts by ကိုဂျိန်း
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ ကိုဂျိန်း အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Share folder နှင့် Lan password ပိတ်နည်းများ ဗေဒါလေး Network ပိုင်းဆိုင်ရာ 14 31-01-2011 07:28 AM
Share folder ၏လုံခြုံရေးကိုအဆင့်မြင့်တင်ခြင်း။ ( Windows XP Pro Only) komyo2010 ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာတိုလီမုစများ715-10-2010 12:19 AM
Linux Samba Server (SMB) မိုးလွင် Linux များ (သို့) Linux နှင့်ဆိုင်ရာများ019-08-2010 05:17 AM